JABKII SHIISHADDA: Waa sheeko DHAB ah oo dhug u baahan! | Hadalsame Media
Home Madadaalada JABKII SHIISHADDA: Waa sheeko DHAB ah oo dhug u baahan!
JABKII SHIISHADDA: Waa sheeko DHAB ah oo dhug u baahan!
(Hadalsame) 13 Maarso 2019 – Sheedaani waa sheeko dhab ah, waxa ay ku dhacday nin widaaygay ah isaga ayaana iiga sheekeeyey iina ogolaaday inaan qoro, laakiin waxa uu ka cudurdaartay in magiica warbaahinta bulshada lagu faafiyo. Sidaas darteed waxaan adeegsanaynnaa magaca Dugsiiye.
Markii sacaaddu gaartay afartii galabnimo (4pm) ayaa la gaaray waqtigii Dugsiiye qaadan lahaa hal saac oo nasasho ah. Maadaama magaalada la wada xiray Dugsiiye waxa uu ku noqday dhiboogiisa (depot) si uu halkaas bareegiisa (break) ugu qaato.
Previous articleXOG: Xagee marayaa dadaalka Soomaaliya ugu jirto soo daabacashada lacag cusub?
Next articleWarbixin ka hadlaysa tirada dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee la dilay sanadkaan oo kaliya. Yaa fuliyay howlgallada?